khantphyo – Ubuntu MM
virbr0 is missing. You need to install libvirt ကျွန်တော်တို့တွေ Linux OS တွေမှာ GNS3 ကို install လုပ်ရင် တက်တတ်တဲ့ Error ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ virbr0 is missing. You need to install libvirt ကို ဘယ်လို Fix လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. Default network တစ်ခု ပြန်ပြီး config လုပ်ပေးလိုက်ချင်းအားဖြင့် issue ကို ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ Default config ဖိုင်လေးတစ်ခု အရင်ဖန်တီးလိုက်ပါ..ကျွန်တော်ကတော့ /tmp အောက်မှာပဲ Create လုပ်လိုက်ပါတယ်။ Default.xml […]
ဒီနေ့ တွေးမိတာလေးရှိတယ်ဗျာ့ ခုဆို ကိုဗစ်နဲ့..မို့ အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ Challenge လေးတွေလုပ်နေတာကို မြင်တော့ .. အိမ်မှာနေရင် ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်နေတဲ့ ညီ/ညီမတွေ skillတိုးဖို့ WFH လုပ်နေရတော့ အရင်ကထက် အချိန် နည်းနည်းပိုမယ်လို့ ယူဆပြီး ကိုယ်တွေ နည်းပညာပိုင်းအတွက် လဲ Challenge လေးတစ်ခုလုပ်ချင်ပါတယ်ဗျာ။ အဲ့ချဲလန့်လေးကတော့ Technical (eg, arduion, raspberry pi, Network, Linux,etc,..)ပိုင်းနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ Document/Guide လေးတွေ ရေးပေးပြီး .. နောက်ထပ် လူ ၄ ယောက်ကို Tag တွဲပြီး ရေးဖို့ challenge လုပ်ဖို့ပါပဲ .. အိမ်နေရင် နားနေမယ့် ကလေးတွေလဲ Skill တက်တာပေါ့ဗျာ.. Challenge လုပ်ရင်း […]
ဒီနေ့ပြောမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ Raspberry Pi ပေါ်မှာ Myanmar လို ရိုက်လို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် Test လုပ်မယ့် device ကတော့ Rpi3mobel B+ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ OS ကတော့ raspbian ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး https://mcf.org.mm/pyidaungsu-font.html ကနေပြီးတော့ Pyidaungsu font ကို ဒေါင်းလုတ် လုပ်ပါ။ အဲ့နောက် home directory အောက်မှာ .font ဆိုတဲ့ directory တစ်ခု တည်ဆောက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဒေါင်းထားတဲ့ Pyidaungsu Font ဖိုင် *.ttf လေးကို copy ကူးပြီးထည့်လိုက်ပါတယ်။ ထည့်ထားပြီးနောက် Run ပေးရမယ့် […]
ဒီနေ့ ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ Cisco Device တွေမှာ Linux shell script တွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ Linux command တွေကို ဘယ်လို enable လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ့.. စိတ်ဝင်စားသွားဟုတ်
စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ကို ဆက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါဗျာ… အချိန်နဲနဲလေး ပေးယုံနဲ့ တစ်ကယ်အကျိုးရှိမှာပါ .. ကဲ့စလိုက်ကျရအောင်ဗျာ..PDF download Link (Click here) https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/netmgmt/configuration/guide/Convert/IOS_Shell/nm_ios_shell.html#wp1065465 ***Cisco IOS Release 15.1(4)M, 15.1(2)S, and later releases. *** အပေါ်ကလင့်လေးကတော့ cisco က official ထုတ်တားပေးတဲ့ reference document လေးပါ ပုံမှန် အတိုင်းဆိုရင် […]
Application & Softwares Knowledge Tutorials Ubuntu
29/11/2019 29/11/2019 khantphyo
Packet tracer 7.2.2 installation on Ubuntu (libpng12.so.0 – solved)
ပထမဆုံး https://www.netacad.com/courses/packet-tracer ကနေပြီးတော့ packet tracer course ကို enroll လုပ်ပြီး packet tracer ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်ပါ.. အဲ့ကနေ မ down တက်ရင်လဲ https://mega.nz/#F!Dc0HRLjS!n1PuGKDMZAKI4zhh3hwA0Q ကနေ ဒေါင်းလိုက်လို့ရပါတယ် .. PacketTracer-7.2.2-ubuntu-setup.run ကိုဒေါင်းပြီးသွားရင် execute လုပ်လို့ရဖို့ execute permission ပေးပါ .. chmod +x PacketTracer-7.2.2-ubuntu-setup.run or chmod 777 PacketTracer-7.2.2-ubuntu-setup.run အဲ့နောက်မှာတော့ terminal ကနေ ./PacketTracer-7.2.2-ubuntu-setup.run လို့ runလိုက်ရင် installation box ကျလာပါလိမ့်မယ်.. ပုံမှန် အတိုင်း next, ok ပေးပြီး install လုပ်သွားယုံပါပဲ .. အဲ့နောက်မှာတော့ terminal […]
Tagged libpng12.so.0, packet tracer, ubuntu	Discover